दर्शन, सभ्यता र इतिहास भएको चाक्चाकुर चाडलाई ‘सेक्सुवल इसु’ बाट किन हेरियो ? «
दर्शन, सभ्यता र इतिहास भएको चाक्चाकुर चाडलाई ‘सेक्सुवल इसु’ बाट किन हेरियो ?
प्रकाशित मिति : १६ पुष २०७५, सोमबार २१:१३
काठमाण्डौ- बिषय प्रबेशमा यो पङ्तिकार किरात नाछिरिङ समुदायको ब्यक्ती भएको प्रष्ट्र पार्न चाहान्छु । एक निजी दैनिक मिडियमा ‘चाक्चाकुर चाड’लाई विवाद पुर्ण समाचारको प्रती नै केन्द्री त हो । पहिला ‘चाक्चाकुर चाड’ केहो बाट नै जाउ । कुलुङ भाषामा मीनाको अर्थ ‘मान्छे’ र मिनारीको अर्थ ‘मान्छेको पाखुरी’ हुन्छ । दाचाम्को अर्थ ‘भण्डार वा ढुकुटी’ हो भने निङ्दोङले ‘नयाँ वर्ष’ र चाक्चाकुरले ‘चासुम् अर्थात अन्नको सह’ तथा पुस महीनालाई जनाउँछ । मानव पाखुरीको बलबाट फलेर भण्डारण गरिएको अन्नको नयाँ वर्षमा सह होस् र नयाँ सालमा अनिकाल नलागोस् भनेर पितृ र प्रकृतिलाई शुरुको समय पुज्नु हो ।
चाक्चाकुर चाड मनाउन कार्यक्षेत्रबाट गाउँ आएकाले बस्ती भरिभराउ भएको छ । विशेष गरी अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा गाउँ बाहिर भएकासमेत छुट्टी मिलाएर घर आएका छन् । यसरि सामाजिक रुपमा समुदा यले भब्य मनाउने चाड हो । चाक्चाकुरमा सबै गाउँभरिका मानिस भेला भएर नाचगान, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, विभिन्न किसिमका खेल खेलेर रमाइलो गर्दै मनाइन्छ ।
‘चाक्चाकुर चाड’मा आफनै दर्शन, सौर्न्दर्यता, सभ्यता र इतिहास जोडिएको छ । हिन्दु धर्ममा मानिने शिबरात्रीमा राज्यमा कानुनबाट बर्जित गाजा खान छुट हुने देशमा ‘सेक्सुवल इसु’ बाट हेरिनु कतिको सकारात्मक दृस्टीकोण हो ? ठाउ ठाउमा भिबिन्न चाडपर्बमा र मेलामा किन कण्डम बितरण गरिएन? वा गरिए भने किन समाचार आएन ?
औपचारिकरुपमा देशभर चाक्चाकुरलाई मनाउने शुरुआत नेपाल किराँत कुलुङ भाषामा संस्कृति उत्थान सङ्घ, केन्द्रीय कार्यसमितिको पहलमा २०६२ बाट थालिएको कुरा सस्थाको महा-सचिब ईन्द्र कुलुङले बताएको थियो एक भेटमा पङ्तिकारलाई । कुलुङजातिको महान् चाडका रुपमा लिइने चाक्चाकुरको अवसरमा महाकुलुङ गाउँमा विभिन्न प्रतियोगिताको आयोजना गरिन्छ जस्तै भाले जुधाई, गोरु जुधाई, धनु हान्ने, छेलो हाने, भलिबल्, फुटबल, गायन, नृत्य, टेबलटेनिस आदी गेम हुन्छ । सस्कृतिका रुपमा पुर्खाहरुले गर्दै आएको परम्परा खेल खेलिन्छ । भेषभुषा गरगहना, लवाई, खुवाई देखाउने, त्यहिलाई निरन्तर दिन पुर्खालाई सम्मान दिन यो चाड मनाईन्छ । सामाजिक र सास्कृतिक चाडमा आफनै बैज्ञानिक विधि र प्रणाली रहेको छ भने सास्कृतिक आफ्नै मुल्या मान्यता रहेको छ ।
कुलुङको सास्कृतिक पोशाकमा सजिएको महिलाहरु
यसरि मनाईने चाडलाई समाजको दायित्व र कर्तब्य स्वरुप स्वास्था चौकि, सुरक्षाकर्मि, स्वयमसेवक हुन्छन । यस्ता बिषयलाई मिडियमा अतिरिन्जित गर्नु भन्दा पनि सहयोगी हुनुपर्दछ । सुरक्षित यौनका लागि कण्डम आवश्यक छ । त्यो कण्डम सर्वसुलभ नभएको अवस्था, हुँदा पनि लिन जान लाज लाग्ने अवस्थामा वितरण गरेर ठिक कार्य भए पनि ‘कण्डम बाडेकै शिर्षक्’ मा समचार आउन पर्ने देखिदैन । बरु कुनै चाडको बिशेष कुराको महत्वको बारेमा उचित हुन्छ । हिजो देखी नै एक पक्षिय रुपमा नक्ष्लिय समचार आएको प्रमाणित हुन्छ । ‘सेक्सुवल इसु’बाट नै हेरिने हो भने हिन्दू धर्मको शिबरात्रीमा सबै भन्दा धेरै ‘सेक्सुवल इसु’ हुन्छ तर ‘चाक्चाकुर कण्डम प्रसंग’कै समचार बन्नु अचम्म नै हो ।
कुलुङको सास्कृतिक सस्कृतिमा कुनै एक राष्ट्रिय दैनिकमा आएको न्युजमा आम्शिक सत्यता होला तर किरात कुलुङ समुदायको ‘सास्कृतिक चाड चाक्चाकुर’ लाईअन्य ढङबाट प्रहार गर्न पाइदैन । चाक्चाकुर चाडमा आफनै दर्शन, सौर्न्दर्यता, सभ्यता र इतिहास जोडिएको छ । हिन्दु धर्ममा मानिने शिबरात्रीमा राज्यमा कानुनबाट बर्जित गाजा खान छुट हुने देशमा ‘सेक्सुवल इसु’ बाट हेरिनु कतिको सकारात्मक दृस्टीकोण हो ? ठाउ ठाउमा भिबिन्न चाडपर्बमा र मेलामा किन कण्डम बितरण गरिएन? वा गरिए भने किन समाचार आएन ? यो सोचनिय र बिचारनिय प्रश्न छ । यहाँ निर शिक्षा र चेताना फरक हुन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
बरु सबै जातको फुलहरु बगैचामा फुल्न दिने निती अनुसार चाक्चाकुरलाई राज्यले पनि विशेष महत्वको चाडका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने देखिन्छ ।